Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo madaxda Itoobiya la kulmay – Radio Daljir
Janaayo 17, 2018 8:52 b 1
Magaalada Addis Ababa ee Caasimadda Dalka Itoobiya waxaa xalay ka dhacay kulan u dhaxeeyey Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn.
Kulanka ayee diiradda ku saareen dhinacyada Ammaanka, Ganacsiga Berbera iyo xoojinta Xiriirka ka wada dhexeeyo labada Dhinac, iyo sidii Itoobiya ay xiriir cusub ula yeelan laheyd Madaxweynaha Cusub ee Maamulka Soomaaliland Muuse Biixi.
Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in waxyaabaha uu kala hadlay Wasiirka Koowaad ee Itoobiya ay kamid ahaayeen sidii ay labada dhinac u adkeyn lahayeen amniga Deegaanada ay wadaagaan, isku socodka ganacsiga iyo arrimo kale oo labada dhan Muhiim u ah.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa sheegay in Amniga Soomaaliland uu yahay amniga Itoobiya, sidoo kalane Nabad galyada Itoobiya ay lamid tahay tan Soomaaliland.
“Waxaan ka wada hadalnay Amniga, waxaan aaminsanahay in Amniga Soomaaliland uu lamid yahay kan Itoobiya, kan Itoobiyane uu yahay sidaas oo kale, waxaan kasoo isla meel dhignay arrinta Berbera iyo sidii ay ugu sii socon laheyd labada dhinac sidii aan ugu guuleysano” ayuu yiri Hailemariam Desalegn.
Maamulkii Madaxweyne Siinlaayo ayaa heshiis Itoobiya ay saami ku heleyso wax soo saarka Dekeda Berbera la galay, waxaana bishii September soo ifbaxday warar sheegaye in Xukuumadda Addis ay saluugsan tahay Saamiga laga siinayo
` 2 years ago